Argentina oo ciyaarta finalka Copa America ku garaacday 1-0 xulka Brazil : Calanka.com
Argentina oo ciyaarta finalka Copa America ku garaacday 1-0 xulka Brazil
Lionel Messi ayaa waxa uu soo afjaray sugitaankiisii koobkii ugu horreeyay ee caalami ah kaddib markii Argentina ay finaalka koobka Copa America ku garaacday xulka kubadda cagta ee Brazil ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Rio Maracana.
Messi oo 34 jir ah ayaa garoonka isku riday farxad awadeed markii garsooruhu uu ku dhawaaqay seeriga dhammaadka ciyaarta, isla markiiba waxaa ku soo orday saaxiibadii xulka qaranka, markaas oo ay inta ay kor u qaadeen sare u tuureen, sidaasna waxa uu ciyaaryahankaasi ku gaaray heer sare oo isaga iyo dalkiisaba uu gaarsiiyay tartankiisii 10-aad ee heer caalami ah.
Sidoo kale waxa uu Argentina ka caawiyay inay soo afjarto 28 sanadood oo ah markii ugu dambaysay oo ay tartanka qaadaan, Messi-na waxaa loo magacaabay inuu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa tartanka kaas oo uu afar gool ku dhaliyay.
Angel di Maria ayaa dhaliyay goolka kaliya ee ciyaarta weliba si qurux badan ayuu u dhaliyay, kaddib markii uu ka faa’iidaystay baas uu u soo dhigay Rodrigo de Paul.
Messi ayaa helay fursad uu ciyaarta dhinac ugu ridi karay hasayeeshee goolka ayuu ku simbiririxooday, sidaas ayuuna ku lumiyay wax u muuqanayay fiinaal cajiib ah oo soo maray kabtanka Argentina.
Xulka koobka difaacanayay ee Brazil ayaa ka niyadjabay markii ay ka faa’iidaysan waayeen fursadihii ay ka khasaariyeen Richarlison iyo Gabriel Barbosa, kuwaas oo uu shabaqiisa ka badbaadiyay Emi Martinez.
Si ka duwan sida uu u dabaaldegay Messi ayaa ciyaaryahanka nambarka 10-aad u wata xulka Brazil ee ay Barcelona u soo wada ciyaari jireen ee Neymar ayey ilmo soo dhaaftay markii la yeeriyay seerigii dhammaadka ciyaarta, isagoo weli ciyaaryahankaas uu baadigoobayo guushiisa caalamiga ah, maadaama uusan dheelin tartankii 2019 ee ay Brazil qaadday koobka Copa America, markaas oo uu dhaawac ku maqnaa.
Labada ciyaaryahan ayaa ka soo wada dheelay garoonka Nou Camp intii u dhaxaysay 2013 illaa 2017 ka hor inta uusan laacib reer Brazil u dhaqaaqin dhinacaas iyo kooxda Paris St-Germain, ayaa laabta muddo isku hayay intii la sugayay bilaabmashada xafladda koobka.
Ciyaarta waxaa daawaday 7,000 oo qof oo garoonka marti ku aheyd waana markii ugu horraysay tartankaasi sanadkan ee ay daawadayaal garoonka loo ogolaaday, fayraska karona awadii.
Taageerayaasha Brazil ayaa qaylinayay markasta oo ay kubaddu lugta u gasho Messi.
Tartanka ayaa dib loo dhigay muddo sanad ah cudurka safmarka ah awadii iyadoo dalalka Colombia iyo Argentina oo martigelin lahaana laga wareejiyay oo daqiiqadiihii ugu dambeeyay loo weeciyay Brazil oo martigelisay midkii 2019-ka, arrintaas oo horseedday dhaleecayn badan maadaama xaalada cudurkaasi ee dalkaasi ay sare u socdeen.